फोर्ब्सले सार्वजनिक गर्यो विश्वका शक्तिशाली व्यक्तिको सुची: रुसी राष्ट्रपतिलाई पछि पार्दै सी जिनपिङ एक नम्बर नरेन्द्र मोदी नबौ स्थानमा, हेर्नुस अन्य कसको स्थान कस्तो ?::सुनौलो न्यूज
फोर्ब्सले सार्वजनिक गर्यो विश्वका शक्तिशाली व्यक्तिको सुची: रुसी राष्ट्रपतिलाई पछि पार्दै सी जिनपिङ एक नम्बर नरेन्द्र मोदी नबौ स्थानमा, हेर्नुस अन्य कसको स्थान कस्तो ?
एजेन्सी । फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको विश्वका सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तित्वहरुको सूचीमा चारपटकसम्म पहिलो स्थानमा रहिसकेका रुसका राष्ट्रपति भ्लाद्मिर पुटिनलाई पछि पार्दै पहिलोपटक चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले शीर्ष स्थान हासिल गरेका छन् । त्यसैगरी उता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि आफ्नो अधिक लोकप्रियताका कारण यस वर्ष नवौँ स्थानमा परेका छन् । भारतबाट उनका साथै चर्चित व्यवसायी मुकेश अम्बानीले पनि यस सूचीमा ३२ औँ स्थान प्राप्त गरेका छन् ।
फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको ७५ व्यक्तित्वहरुको सूचीमा नेपालबाट भने कसैको नाम उल्लेखित छैन । फोर्ब्सका अनुसार पृथ्वीको ७ अर्ब भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा यिनै ७५ व्यक्तित्वहरुको प्रभाव सबैभन्दा बढी रहेको छ । फोर्ब्सले यी व्यक्तिहरुको छनौट मानिसहरुमा उनीहरुको कार्य र बोलीले पार्ने अधिक प्रभावका आधारमा गर्ने गरेको बताएको छ ।
१० वर्षसम्म शीर्ष दश स्थानमा रहँदै आएकी जर्मनीकी चान्स्लर एन्जेला मार्कल यसपटक भने चौथो स्थानमा आएकी छन् । उता कानूनी अनुसन्धान र विभिन्न काण्डका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प भने तेस्रो स्थानमा परेको बताइएको छ । त्यसैगरी यस वर्षको सूचीमा फेसबुकका कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्ग र बेलायती प्रधमानमन्त्री टेरेजा मेलाई समेत पछि पार्दै धेरै अघि आएका भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको फोर्ब्सले समेत अधिक चर्चा गरेको छ । राजनीतिज्ञहरुमा ट्रम्पपछि सबैभन्दा धेरै ट्वीटर फलोअर भएका मोदीको प्रभाव भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि उत्तिकै रहेको फोर्ब्सले बताएको हो ।
यसवर्षको सूचीमा आएका १७ नयाँ नामहरुमा भने सबैभन्दा अगाडि साउदी अरबका राजकुमार मोहोम्मद बिन सलमान आठौँ स्थानमा आउन सफल भएका हुन् । त्यसैगरी ५४ औँ स्थानमा परेका दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनको नाम पनि पहिलोपटक यस सूचीमा देखा परेको हो । तर उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले ३६ औँ स्थान प्राप्त गरि मूनलाई पछि पारेका छन् । त्यस्तै फ्रान्सका म्याक्रोन १२ औँ मा रहेका छन् भने विवादित रहेपनि जापानी प्रधानमन्त्री अझै ३८ औँ स्थानमा रहन सफल भएका हुन् । उता सिरियाका बसर अल अस्सद पनि ६२ औँ स्थानमा रहेका छन् ।